မောငျ(စှယျစုံကမျြး): September 2013
ဒါကတော့ လိပ်စာကတ် အလုပ်ကတ် စသည်ဖြင့် ကတ်ပေါင်းစုံလုပ်ဖို့အတွက်
ဒီဇိုင်းအစုံအလင်ကိုပါရှိပါတယ် လိုအပ်သူများကတော့ ဒေါင်းထားပေါ့
Author Free Firmware And Tools at 9:34:00 PM 1 မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 1:19:00 PM 1 မှတ်ချက်
Google Earth အသုံးပြုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဗားရှင်း အသစ်မျာ ဓာတ်ပုံတွေလည်းအရင်ကထက် တော်တော်စုံလာပါတယ်
Portable ဗားရှင်းနဲ့ setup ဗားရှင်း နှစ်မျိုးလုံးတင်ပေးထားပါတယ်
ကိုယ်နှစ်သက်ရာကို ရွှေးပြီး အသုံးပြုနိင်ပါတယ် ခင်ဗျာ အသုံးပြုမယ်ဆို အောက်ကလိပ်စာမှာရယူုနိုင်ပါတယ်
Setup Download>>>>mirrorcreator (or)zippyshare
Portable Download>>>>mirrorcreator (or)zippyshare
လိုင်စင်အတွက် Patch ဖိုင်လေး ထည့်ပေးထားပါတယ်
Author Free Firmware And Tools at 6:18:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Computer အတွက် Google Earth
သူကျွန်တော့်ကို `အရမ်းလွမ်းတယ်´လို့ပြောတိုင်း ကျွန်တော်ငိုချင်တယ်……
သူသာတကယ်လွမ်းတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖုန်းလေးတခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် sms တိုလေးတကြောင်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်မနေပို့ပေးပြီး အရမ်းသတိရကြောင်းပြောပြမိမှာပါ……
သူကျွန်တော့်ကို `စိုးရိမ်ပြီးစိတ်ပူတယ်´လို့ပြောတိုင်း ကျွန်တော်ငိုချင်တယ်……
သူသာတကယ်စိတ်ပူတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခိုက် ဖုန်းလေးတခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် sms တိုလေးတကြောင်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်မနေပို့ပေးပြီး ဆေးသောက်ပြီး ဆေးခန်းသွားဖို့ နှိုးဆော်နေမှာပါ……
သူကျွန်တော့်ကို `အရမ်းချစ်တယ်´လို့ပြောတိုင်း ကျွန်တော်ငိုချင်တယ်……
သူသာတကယ်ချစ်တတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ကြင်နာယုယမှုတွေကို ဥပက္ခာပြုထားမှာမဟုတ်ဘူး……
ကျွန်တော်စိုးရိမ် စိတ်ပူလို့ ဂရုတစိုက်နဲ့ ပြောတဲ့စကားတွေကို သူမျက်နှာလွှဲခဲပစ် လုပ်ရက်မှာမဟုတ်ဘူး……
ချစ်သူရယ်…… နင်တကယ်မချစ်ဘူးဆိုတာသိရက်နဲ့ ငါ့ရဲ့တဖက်သတ်အချစ်တွေက နင်မှနင်ဖြစ်နေတယ်……
နင်တကယ်ငါ့ကို သတိမရဘူးဆိုတာသိရက်နဲ့ ငါ့အတွေးစိတ်ကူးတွေက နင်မှနင်ဖြစ်နေတယ်……
နင်တကယ်ငါ့အတွက် မသိတတ်ဘူးဆိုတာသိရက်နဲ့ နင့်အတွက်စိုးရိမ်သောကဖြစ်နေတယ်……
ငါ့ရဲ့ဝဋ်ကြွေးတွေက အတွေးသံသရာမှာတောင် အမှောင်ချရင်း အလင်းမမြင်သေးတဲ့ငါ့အနာဂတ်ကို နင့်မေတ္တာတချို့နဲ့လှော်ခတ်သွားပါရစေ……
Author Anonymous at 6:55:00 PM0မှတ်ချက်
Corel Videostudio Pro X6 + Keygen ( ဗီဒီယို တည်းဖြတ်တဲ့ ဆောဝဲလေးပါ )
Corel Videostudio Pro X6 ကတော့ Video တည်းဖြတ်သမားတွေအတွက် အရမ်း အသုံးဝင်မှာပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အရမ်းကိုမြန်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့် Video Editing ဆောဝဲ ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ Video တွေကိုဖြတ်ညှပ်ကတ် လုပ်တာ၊ Transition Effects ထည့်တာ၊ စာတန်းထိုးတာ၊ Background Music ထည့်တာ၊ Size လျှော့ချတာ၊ စတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါ တယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်က 1.31GB တောင်ဆိုတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် Uplode တင်ဖို့အခက် ခဲဖြစ်နေပါ တယ်။ ဒေါင်းလင့် ကိုတော့ မူရင်း ကနေ သယ်လာထားပါတယ်။ Keygan ကိုတော့ တင်ပေး ထားပါတယ်။ ဆောဝဲလ် ကိုဒေါင်းပြီးရင် Keygan ထဲက Key ကိုထည့် ပြီးရင်တော့ Full Version သုံးလို့ရပါပြီ။ Video တည်းဖြတ်လို့ ကောင်းပြီး တကယ်ပေါ့ပါး တဲ့ဆောဝဲလေးပါ။ အောက်ကလင့် မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
>>>>>Download Corel Videostudio Pro X6 Keygen Only<<<<<
>>>>>Download Corel Videostudio Pro X6<<<<<
Author Zaw Min Than at 3:46:00 PM 1 မှတ်ချက်
'' ဒီနေ့ ----
ငါ ပြန်ခွာလိုက်တယ် -------
ခဏ ခဏ ကြည့်မိတဲ့
ဓါတ်ပုံ Album လေးလည်း
သေတ္တာ အောက်ဆုံး အကန့်မှာ
အပြီးသတ် သော့ခပ် သိမ်းလိုက်တယ် -----
နင် အန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက် ညှပ်ထားမိတဲ့
ပရိတ်ကြီး (၁၁)သုတ် စာအုပ်ကြားထဲက
ငါဖယ်ဖို့ လက်တွန့်နေတုန်းပဲ ------
''ဝဋ်'' ဆိုတာ လည်တက်သတဲ့
ငါ ''ဝဋ်'' လည်တာဆိုရင် ----
နင် တန်ပြန် ''ဝဋ်'' မလည်ပါစေနဲ့ ----
အဲဒါ --- ငါနင့်အတွက်နောက်ဆုံး
ပေးနိုင်တဲ့ ''လက်ဆောင်'' ဆုတောင်းစကားပါ ------ ''
Author Anonymous at 1:15:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: စိမ့်စိမ့်(တောင်ကြီး)ရဲ့ကဗျာများ, ရင်ထဲထိတဲ့ သူတို့ ကဗျာ
Author Zaw Min Than at 1:24:00 PM0မှတ်ချက်
Your Uninstalle အသုံးပြုသူတွေအတွက် Update လေးတွေ့လို့
သူကတော့ တော်တော်တော်များသိကြမှာပါ မလိုအပ်တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကို ဖြုတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါဘဲ သူက ကလစ်တစ်ချက်ထဲနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တာ ဖြုတ်လို့ရပါတယ်
Install လုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီး လိုင်စင်ထည့်တဲ့အချိန်ထိ အင်တာနက်လေးပိတ်ထားပါ
Author Free Firmware And Tools at 11:12:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Computer အတွက် Uninstaller
သူတို့ မသိကြလို့ ပါ
'' တကယ်မချစ်လို့ ဝေးကြတာပါတဲ့ ''
- အခုအချိန်မှာ မောင်
တောင်းခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတာကိုလေ ---
ကျွန်မ အသံကို မောင်မကြားချင်တော့ပေမယ့်
တချိန်က ကျွန်မအသံကို ကြားချင်လို့
မောင် ph တွေအကြိမ်ကြိမ် ဆက်ခဲ့ဖူးတယ်
- အခုအချိန်မှာ ဘာမှမဟုတ်တော့ပေမယ့်
ကျွန်မ အကြိမ်ကြိမ်ငိုခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတာကိုလေ -----
ဆိုတဲ့ ဂတိစကားလေးကို မောင့်ဆီက
- သူတို့မသိလို့ပါနော် --
ကျွန်မ နဲ့ မောင် အခုချိန်မှာ ဘာမှမဟုတ်တော့ပေမယ့်
တချိန်က အရမ်းချစ်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတာကိုလေ -----
- တကယ်တော့ မောင်နဲ့ကျွန်မနဲ့ကြားမှာ
လမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သူတို့မသိကြလို့ပါမောင်ရယ် ------
စိမ့်စိမ့် ( တောင်ကြီး )
မင်္ဂလာပါ သည်နည်းပညာလေးကတော့ မိမိတို့ဘလော့မှာ ကိုယ်ညွှန်ခြင် အရေးကြီး ပို့စ်နေရာလေးတွေကို စလိုက်တာ ပုံစံလေးနဲ့ လှလှပပ ညွှန်ပြလိုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်... သည်လို နည်းလမ်းလေးတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်. အောက်မှာ
Author Unknown at 8:10:00 PM0မှတ်ချက်
မင်္ဂလာပါ သည်နည်းပညာလေးကတော့ မိမိတို့ဘလော့မှာ ကိုယ်ညွှန်ခြင် အရေးကြီး ပို့စ်နေရာလေးတွေကို စလိုက်တာ ပုံစံလေးနဲ့ လှလှပပ ညွှန်ပြလိုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်... သည်လို နည်းလမ်းလေးတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်... နံပါတ် (၁) - နံပါတ် (၂) ကိုလည်း တင်ပြထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်...နော်... အောက်မှာ နည်းလမ်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ကုဒ်တွေ ပေးထားပါတယ်... လေ့လာပြီး ကလိလိုက်နော်....လန်းးးတယ်...ဂျ
အဲနေရာမှာ အောက်ကကုဒ်တွေ ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါနော်....
Author Unknown at 8:09:00 PM0မှတ်ချက်
Wondershare DVD Creator 2.6.5.32 With Registration Code
Wondershare DVD Creator လေးကတော့ အခွေ Burn ဖို့အတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေတဲ့ ဆောဝဲ တခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် စမ်းသုံးကြည့်ပြီးပါပြီ။ အရမ်းကို လန်းပါတယ်။ အသုံးပြုရတာလည်း အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများ အခွေ Burn ဖို့ Menu လှလှလေးတွေ ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Wondershare DVD Creator ဆောဝဲလေးက တကယ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆောဝဲ လေးပါ။
Full Version သုံးလို့ရအောင် Resgister Key ပါ တခါတည်း တင်ပေးထားပါတယ်။ ဆောဝဲကို install ပြီး Key ထည့်ပြီးရင်တော့ Full Version သုံးလို့ရပါပြီ။ အခွေကူးသမားတွေ အတွက် အရမ်း အသုံးဝင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ကလင့်မှာ ဆောဝဲကိုဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
>>>>>Download Wondershare DVD Creator<<<<<
Author Zaw Min Than at 3:25:00 PM0မှတ်ချက်
Digital Life Journal Issue Vol-2 ၊ Issue 19 (16.9.13)
Digital Life ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တင်္နလာနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Digital Life ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Digital Life ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Digital Life Journal Vol(2), Issue (19) ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 16 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Author Pyae Phyo (MMiTD) at 1:03:00 PM0မှတ်ချက်
မင်္ဂလာပါ သည်နည်းပညာလေးကတော့ မိမိတို့ဘလော့မှာ ကိုယ်ညွှန်ခြင် အရေးကြီး ပို့စ်နေရာလေးတွေကို စလိုက်တာ ပုံစံလေးနဲ့ လှလှပပ ညွှန်ပြလိုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်... သည်လို နည်းလမ်းလေးတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်... နံပါတ် (၁) ကိုလည်း တင်ပြထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်...နော်... အောက်မှာ နည်းလမ်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ကုဒ်တွေ ပေးထားပါတယ်... လေ့လာပြီး ကလိလိုက်နော်....လန်းးးတယ်...ဂျ
Author Unknown at 9:32:00 PM0မှတ်ချက်
မင်္ဂလာပါဗျာ.... အားလုံးကို နည်းပညာလေးတစ်ခု လက်ဆင့် ကမ်းခြင်ပါတယ်.. ဒါလေးကတော့.. မိမိတို့
ဘလော့မှာ ကိုယ်ညွှန်ပြခြင်သော နေရာလေးတွေ ပို့စ်လေးတွေအား Slider လေးနဲ့ ခပ်လန်းလန်းလေး
လမ်းညွှန်ပြသပေးတဲ့နည်းလမ်းလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်... သည်လို နည်းလမ်းလေးတွေကို ကျနော် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရေးသား တင်ပြသွားပါ့မယ်... ဒါလေးကတော့ အပေါ်ပြထားတဲ့ ပုံစံ နမူနာလေးအတိုင်းပေါ့
အောက်မှာ ထည့်နည်းနဲ့ လိုအပ်သောကုဒ်တွေ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်....
သူကတော့ အော်တို စလိုက်လေးသွားနေမယ်နော်....လန်းးးးတယ်..ေိေိ
Author Unknown at 9:31:00 PM0မှတ်ချက်
ဘလော့မှာ ကြော်ငြာတွေ (သို့) ဆိုဒ်တွေကို Slide Show လေးနဲ့ ညွှန်ပြခြင်လား
မင်္ဂလာပါ ဘလော့မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ သည်နည်းလမ်းလေးကတော့ မိမိတို့ ဘလော့ပေါ်မှာ ကြော်ငြာတွေ ဖြစ်စေ မိမိတို့ လမ်းညွှန်လိုတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်တွေ ဖြစ်စေ... မိမိတို့သွားစေလိုတဲ့ နေရာလေးတွေ နည်းပညာလေးတွေ ပို့စ်လေးတွေကို ဖြစ်စေ slider ပုံစံလေးနဲ့ လှလှ ပပ လမ်းပြလိုပါက နည်းလမ်းကောင်းလေး တစ်ခုကို ရေးသားဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်နော်....
သူကတော့ စလိုက်လေးနဲ့ဆိုတော့ လှပသေသပ်တယ်.. ပုံလေးတွေ လုပ်မယ်.. လင့်ညွှန်ဖို့ လင့်ထည့်မယ်... ဆိုပါတော့ စမ်းသတ် ကြည့်လိုက်ပါနော်... အောက်မှာ လုပ်နည်းနဲ့ လိုအပ်သောကုဒ်တွေကို ပေးထားပါတယ်... အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်.....
Author Unknown at 9:16:00 PM3မှတ်ချက်
Author Zaw Min Than at 7:38:00 PM 1 မှတ်ချက်
Video တည်းဖြတ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အားလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တဲ့တည်းဖြတ် ဆောဝဲ CyberLink PowerDirector နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုက အသုံးပြုနည်းစာအုပ်ကိုတင်ပေး လိုက်တာပါ။ CyberLink PowerDirector ဆောဝဲကတော့ ဒီလင့်မှာ ၀င်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ မိမိရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ဖြတ်တာက်ခြင်း ဆက်ခြင်း အလင်းအမှောင်. effect ..စာတန်း ထည့်ခြင်း စတဲ့အရာတွေ ကိုစိတ်တိုင်းကျလုပ်လို့ရတဲ့ အကောင်းဆုံး ဗီဒီယိုရုပ်သံ တည်းဖြတ်တဲ့ဆော့ဝဲတခုပါ။
CyberLink PowerDirector လေးကို ဒေါင်းထားပြီးလို့ မသုံးတတ်သေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများက အောက်က လိပ်စာမှာ စာအုပ်ဒေါင်းလိုက်ပါ။ သူငယ်ချင်းများကလာတောင်းနေတာနဲ့ အရင်ကတည်းကသိမ်းထားတဲ့ စာအုပ်လေးကို အားလုံးပြန်လေ့လာနိုင်အောင် ကျနော်ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ကလင့်မှာ စာအုပ်ကိုဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
>>>>>Download CyberLink PowerDirector.PDF<<<<<
Author Zaw Min Than at 3:29:00 PM0မှတ်ချက်
TeamViewer 8.0.20768 Pro (Fully Activated)
TeamViewer ကတော့ လူတိုင်းနီးပါး သိကြမှာပါ ကွန်ပြူတာမှာ မရှိမဖြစ်အရေးကြီးပြီး အသုံးဝင်တဲ့ဆောဝဲ ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ မသိသေးသူအတွက် ရှင်းပြပါမယ်။TeamViewer က ဥပမာ ကို့ ရဲ့ စက် တခုခု ဖြစ်လို့ ကိုက ပြန်မပြင်တတ် အဲလိုဆိုရင် အဝေးမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အကူညီတောင်း ၀င် ပြင် ခိုင်းလို့ရတဲ့ ဆောဝဲလေးပါ။ အင်တာနက်လိုင်းရှိရုံနှင့် မိမိကွန်ပျူတာကနေ တခြားကွန်ပျူတာကို ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးနေပါစေ ၀င်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဆောဝဲကို install ပြီးတာ နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ You ID နှင့် Password ပြနေလိမ့်မည်။ မိမိပေးဝင်ချင်သည့် သူငယ်ချင်းကို ကိုယ်ရဲ့ID နှင့် Password ပေးလိုက်ရင် ကို့ကွန်ပြူတာ ကို သူငယ်ချင်းက ၀င်ပြင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆောဝဲ ကို Activated လုပ်ပြီးသား မို့ install ပြီးတာနဲ့ full သုံးလို့ရပါပြီ။ ကီးထည့်စရာမလိုပါ......။
နောက်ဆုံးထွက် Version V 8.0.20768 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Key မထည့်တတ် Crack မလုပ်တတ် တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ TeamViewer ကိုမသုံးတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း များ ကတော့ ဒီလင့်မှာ စာအုပ်ဒေါင်းပြီး လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
>>>>>Download TeamViewer 8.0.20768 Pro<<<<<
Author Zaw Min Than at 1:47:00 PM0မှတ်ချက်
Handy Photo v1.1.8 For APK (33MB)
ဓာတ်ပုံပြင်တဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်ကောင်းလေးပါ သူက photoshop ထက်လွယ်ပြီး
photo editing လုပ်တာဝါသနာပါတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့မှာပါ
လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ချို့က နောက်ခံဘက်ဂရောင်း အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်ခြင်း
ဓာတ်ပုံ ကာလာ အလွယ်တကူ ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း
မလိုတဲ့ ပုံတွေ အလွယ်တကူဖြတ်ထုတ်နိုင်ခြင်း
(ဥပမာ လူသုံးယောက်ပုံကို နှစ်ယောက်ပုံထားချင်တယ်ဆိုရင်
လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ပြန်လည်ဖြည့်စွက်နိုင်ခြင်း
ဓာတ်ပုံဘောင်အလှထည့်ဖို့အတွက် ဓာတ်ပုံ ဘောင်များအစုံပါရှိခြင်း စသည်ဖြင့်
Author Unknown at 3:52:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Phone အတွက် Photoshop ဆော့ဝဲ
အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်... ခုတင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ ကျွန်တော် ရေးလက်စ ဖြစ်တဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ လုပ်ဆောင်သင့်သောအချက်လေးများ ဆိုတဲ့ ထဲက အိုင်း (၅) ကိုဆက်လက်ရေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. လိုအပ်ချက်လေးများကို စုစည်းပြီး ကြိုးစား ရေးသားထားပါတယ်.. မပြည့်မစုံဘဲ လိုအပ်နေခဲ့ပါက... ကျေးဇူးပြုပြီး ထပ်မံဖြည့်စွက်ကာ လေ့လာပေးကြဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ...နော်...
ကဲစမယ်နော်... ပထမဆုံး မိမိတို့ ကွန်ပျူတာရဲ့ Win + R ကိုတွဲကလစ်ကာ Run Box ခေါ်လိုက်ပါနော်.
သည်နည်းကတော့Start Type တွေနဲ့ မလိုအပ်တဲ့ Services အချို့ကိုပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ Run ထဲကနေ “msconfig” လို့ရိုက်လိုက်ပီး System Configurationကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်...နော်...ကဲစပြီနော်..
Author Unknown at 9:04:00 PM0မှတ်ချက်
Computer အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သောနည်းလမ်းများ (၄)
မင်္ဂလာပါဗျာ သည်နည်းလမ်းလေးကတော့ ကွန်ပျူတာအတွက် လုပ်ဆောင်သင့်သော နည်းလမ်းလေးများထဲ နံပါတ်စဉ် (၄) ခုမြောက်ဖြစ်ပါတယ်... အရင်က ၁-၂-၃ ဆိုပြီး ရေးခဲ့ပြီးပါပြီနော်
ကဲ ဒါလေးကတော့ ကွန်ပျူတာ မှာ မလိုအပ်တဲ့ အမှိုက်တွေ ၀င်းဒိုးလော့ တွေကို ရှင်းလင်းပေးဖို့
နည်းလမ်းကောင်းလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်... လုပ်နည်းလေးကို အောက်မှာ သေခြာ ရှင်းပြထားပါတယ်..
ပထမဆုံး မိမိတို့ကွန်ပျူတာ start ကနေဖြစ်စေ Win + R တွဲလို့ဖြစ်စေ run box ကိုခေါ်လိုက်ပါနော်
ပထမဆုံး နမူနာလေးတစ်ခုနဲ့ ရှင်းပြလိုက်ပါ့မယ်... အလားတူ လုပ်ဆောင်ရမှာကတော့ အောက်ကဖေါ်ပြထားတဲ့ အချက် ငါးချက်ကိုပါဘဲ...တခု လုပ်ပြတာနဲ့ ကျန်တာ အကုန် အလားတူ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်နော်... ကဲစမယ်နော်.....
Author Unknown at 9:02:00 PM0မှတ်ချက်
Computer အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သောနည်းလမ်းများ (၃)
မင်္ဂလာပါနော် သည်နေ့ ကျနော် ထပ်မံ ကြိုးစားပြီး ကွန်ပျူတာအတွက် လုပ်သင့်သော အချက်လက်လေးများဆိုတာကို ရေးသားမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. အရင်နေ့က နံပါတ် (၁) နဲ့ (၂ ) ကိုတင်ပြ
ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် သည်ဟာကတော့ နံပါတ် (၃) ပေါ့ဗျာ.. ကဲ စလိုက်ကြရအောင်ဗျာနော်
ကဲ ပထမဆုံး မိမိတို့ ကွန်ပျူတာရဲ့ Sound Effect တွေကို ပိတ်ဖို့အတွက် Start ကနေ Contro Panel
Author Unknown at 8:59:00 PM0မှတ်ချက်
Computer အတွက်လုပ်သင့်သော နည်းလမ်းများ (၁)
မဂ်လာပါနော်သည်နေ့ ရေးမဲ့ နည်းပညာလေးကတော့ ကွန်ပျူဆာ ဆားဗစ် ဆရာတွေအတွက် ရီစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပါ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်လို မလည်မ၀ယ်...ယောင်ဝါး ပညာသင်ဘ၀လေးတွေအတွက် နည်းလမ်းလေးတစ်ခု တိုးပါစေဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် သိသူ ကျော်သွားး မသိသူဖေါ်စားပေါ့နော်..ေိေိ
ဘာလဲဆိုတော့ မိမိတို့ကွန်ပျူတာကို လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက်အလက်လေးတွေ များစွာထဲက တစ်ခု
လို့ဆိုကြပါစို့... အထူးသဖြင့် ၀င်းဒိုးတင်ပြီးစ စက်များအား မဖြစ်မနေ လုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်... နောက် လိုအပ်ချက်လေးတွေကို နံပါတ်စဉ်လိုက် တင်ပေးသွားပါ့မယ်... ဒါကတော့
နံပါတ် (၁) အနေနဲ့ပေါ့နော်...
Author Unknown at 6:59:00 PM 1 မှတ်ချက်